Nnyocha ihe gbasara Porn Harms - Ụgwọ Ọrụ Ụgwọ
Home Blog akụkọ Nchọpụta ọmụmụ banyere Porn Harms
Akwụkwọ nke nkọwa maka Nsogbu Ọjọọ Mmebi na June 2018 site n'aka WHO sitere na ihe akaebe doro anya. Otú ọ dị, ụfọdụ ndị ka na-ekwetaghị na ikiri ihe ndị na-akpali agụụ mmekọahụ pụrụ ịkpata nsogbu uche na nke anụ ahụ. Na blog a, anyị na-eleba anya na ihe ọmụmụ ihe kpatara nke 6 bipụtara nke gosipụtara ihe kpatara ka ndị sonyere wepụrụ iji egwu porn wee gwọọ agụụ mmekọahụ na-adịghị ala ala. Ha niile jikọtara iji porn ma ọ bụ ị addictionụ ọgwụ ọjọọ na-eme ka mmekọahụ nwee mmekọahụ na obere mkpali.
1) Ihe Ịntanetị Ịntanetị Na-akpata Mmekọahụ Mmekọahụ? Nyochaa na Akụkọ Ọgwụ (2016)
Nyochaa zuru oke nke akwụkwọ ndị metụtara nsogbu mmekọahụ na-akpata mmekọahụ. N'iji 7 US Navy Navy, nyochaa na-enye ihe ọhụrụ data na-ekpughe oke dị elu na nsogbu ntorobịa mmekọahụ. Ọ na-egosiputa nnyocha ọmụmụ banyere ọrịa na-ahụ maka mmekọahụ na mmekọahụ site na porn Internet. Ndị dọkịta na-enye akụkọ gbasara ụmụ nwoke ndị 3 nke na-ebute mmebi mmekọrịta mmekọahụ. Mmadụ abụọ n'ime ndị ikom atọ ahụ gwọrọ agụụ mmekọahụ ha site na iwepu ojiji nke porn. Nwoke nke atọ enwechaghị ọganihu dịka ọ na - enweghị ike ịkwụsị iji egwu egwu. Ekeputara:
Ihe gbasara omenala ndị na-egosi na ụmụ nwoke nwere ihe isi ike na-egosi na ha agaghị enwe ike ịkọ maka ịrị elu ịrị elu nke nrụrụ erectile, ụja ​​ejaculation, imeju afọ ojuju mmekọahụ, ma belata libido n'oge enwere mmekọahụ n'etiti ndị ikom n'okpuru 40. Nyocha a (1) weere data site n'ọtụtụ ngalaba, dịka, ọgwụgwọ, ndu (ịba ụba / urology), uche (inwe mmekọahụ), mmekọrịta ọha na eze; na (2) na-enye usoro nhazi usoro nlekọta ahụike, ha nile nwere ebumnuche nke ịnye ntụziaka dị mma maka nchọpụta n'ọdịnihu banyere ihe a. A na-enyoghari usoro ihe mkpali nke ụbụrụ dị ka ihe omume na-akpali agụụ mmekọahụ nke metụtara mmekọahụ.
Nyocha a weere ihe àmà na-egosi na ihe ndị na-akpali agụụ mmekọahụ n'Internet (ihe a na-agaghị emeli, ihe nwere ike ime ka ọ bụrụ ihe dị oké njọ karị, usoro vidio, wdg) nwere ike ịdị na-enwe mmetụta nke inwe mmekọahụ na akụkụ nke ihe ndị na-akpali agụụ mmekọahụ n'Internet. ndi mmadu di na nwunye, nke mere na inwe mmekorita ya na ndi choro choro achoghi edebanye aha dika ihe ndi ozo na ntolite. Akụkọ gbasara ahụike na-egosi na ịkwụsị ịntanetị na-eji mgbe ụfọdụ iji dozie mmetụta ndị na-adịghị mma, na-ekwusi ike mkpa maka nyocha dị ukwuu site na iji usoro ndị nwere isiokwu na-ewepu mgbanwe nke ịntanetị na-eji.
Ụgwọ Ọrụ Ụgwọ dere akụkọ banyere ọmụmụ ihe a mgbe mbụ ọ pụtara.
2) Mmekorita nwoke na nwanyị na-enwe mmekọahụ (2016)
Ọmụmụ ihe a bụ onye French psychiatrist onye bụ onye isi oche nke ugbu a European Federation of Sexology. Ọ bụ ezie na ihe na-adịghị mma na-agbanwe ma na-apụta n'etiti ihe ndị na-akpali agụụ mmekọahụ n'Internet na-eji ma na-egbo onwe ya agụụ mmekọahụ, o doro anya na ọ na-ekwukarị ya porn-induced mmechi dysfunctions (erectile dysfunction na anorgasmia). Akwụkwọ akụkọ ahụ na-emegharị ahụmahụ ya na ndị mmadụ 35 bụ ndị mepụtara nkwarụ na / ma ọ bụ anorgasmia, na ọgwụgwọ ya na-abịakwute iji nyere ha aka. Onye edemede ahụ na-ekwu na ọtụtụ n'ime ndị ọrịa ya na-eji porn, na ọtụtụ ndị na-eri ahụ porn. Ihe na-adịghị adị na-egosi ịntanetị dị ka isi ihe kpatara nsogbu ahụ (buru n'uche na masturbation adịghị eme ka ED na-adịghị ala ala, ọ dịghịkwa enye ya dịka ihe kpatara ED). 19 nke ụmụ nwoke 35 ahụ hụrụ ọganihu dị ukwuu na-arụ ọrụ mmekọahụ. Ndị ikom ndị ọzọ kwapụrụ ọgwụgwọ ma ọ bụ ka na-agbalị ịgbake. Ihe odide:
Intro: Na-emerụ ahụ na ọbụnadị na-enye aka n'ụdị ya na-emekarị ebe niile, ma na-elegharakarị nsogbu nhụjuanya anya dị oke njọ na nke dị mkpa, nke a na-ejikọtakarị taa na agụụ mmekọahụ na-akpali agụụ mmekọahụ..
Results: Nsonaazụ mbụ maka ndị ọrịa a, mgbe a gwọchara ha ka ha “ghara ịmụta” àgwà igbo onwe ha agụụ mmekọahụ na ihe ndị ha na-ekirikarị ndị gba ọtọ, na-agba ha ume ma na-ekwe ha nkwa. Mbelata nke ihe mgbaàmà nwetara na ndị ọrịa 19 na 35. Mmebi ahụ na-agbadata ma ndị ọrịa a nwee ike inwe mmekọahụ na-enye afọ ojuju.
Mmechi: Masturbation na-eri ahụ, nke na-esokarị ịdabere na ihe ndị na-akpali agụụ mmekọahụ na cyber, a hụrụ na ọ na-ekere òkè na etiology nke ụfọdụ ụdị nrụrụ erectile ma ọ bụ nsogbu alụmdi na nwunye. Ọ dị mkpa ịhazi usoro nke omume ndị a karịa ịhazi nchoputa site na mkpochapu, iji tinye usoro ịmebi emebi na-achịkwa njikwa ọrụ ndị a.
3) Omume masturbatory na-adịchaghị mma dị ka ihe na-akpata nsogbu na nyocha na ngwọta nke ịda mbà n'obi na ụmụ okorobịa (2014)
Otu n'ime ihe ọmụmụ 4 na akwụkwọ a na-akọ banyere nwoke nwere nsogbu mmekọahụ (ụbụbịnta, fetishes, anorgasmia) na-ebu nje. Ntughari nwoke na nwanyi choro ka otu izu 6 abughi onwe gi site na porn na masturbation. Mgbe ọnwa 8 gasịrị, nwoke ahụ kọwakwuru ọchịchọ agụụ mmekọahụ, mmekọahụ na-eme nke ọma na orgasm, ma na-enwe "ezi mmekọahụ. Nke a bụ nke mbụ nyochaa nke ndị ọgbọ na-enweghị ike ịgbake site na njakịrị mmekọahụ na-eduga na porn. Ihe odide si na akwukwo:
“Mgbe a jụrụ ya banyere igbo onwe ya agụụ mmekọahụ, ọ kọọrọ na n’oge gara aga na ya na-eme onwe ya ihe ike na ngwa ngwa mgbe ọ na-ekiri ihe ndị na-akpali agụụ mmekọahụ kemgbe ọ bụ nwata. Ihe ndị na-akpali agụụ mmekọahụ na-agụnyekarị zoophilia, na ịgba ohu, ịchịisi, obi ọjọọ, na masochism, mana o mechara nwee mmasị na ihe ndị a ma chọọ ihe nkiri ndị na-akpali agụụ mmekọahụ siri ike karị, gụnyere mmekọahụ transgender, orgies, na mmekọahụ ike. Ọ na-azụta ihe nkiri na-akpali agụụ mmekọahụ nke iwu na-akwadoghị banyere mmekọahụ rụrụ arụ na ndina n'ike ma jiri anya nke uche hụ ihe nkiri ndị ahụ iji soro ụmụ nwanyị nwee mmekọahụ. O ji nke nta nke nta kwụsị inwe agụụ mmekọahụ na ike ọ na-eche n'echiche ma belata oge imetọ onwe ya. ”
Na mmekorita nke izu ụka na onye na-agwọ ọrịa gbasara mmekọahụ, a gwara onye ọrịa ahụ ka ọ zere ihe ọ bụla metụtara mmekọahụ, gụnyere vidiyo, akwụkwọ akụkọ, akwụkwọ, na ịntanetị.
Mgbe ọnwa 8 gasịrị, onye ọrịa ahụ kwuru na ọ na-enwe ọganihu na-aga nke ọma na ejaculation. O mere ka ya na nwanyị ahụ dịghachi ná mma, ha ji nwayọọ nwayọọ malite inwe mmekọahụ dị mma.
4) Kedu ka o si sie ike ịgwọ ejaculation oge na-adịghị anya n'ime ihe gbasara akparamàgwà nwa oge? Ntụle ọmụmụ ihe (2017)
Otu akụkọ banyere "okwu" dị iche iche na-akọwa ihe kpatara na ọgwụgwọ maka ejaculation egbu oge (anorgasmia). "Onye ọrịa B" nọchitere anya ọtụtụ ụmụ okorobịa na-agwọ ọrịa. N'ụzọ na-adọrọ mmasị, akwụkwọ akụkọ ahụ na-egosi na ngwa ngwa nke "Patoman B" arịbaworo n'ime ihe siri ike "," dị ka ọ bụ mgbe ahụ ". Akwụkwọ akụkọ ahụ na-ekwu na ejaculation egbu oge na-egbu oge abụghị ihe a na-adịghị ahụkebe, nakwa na ịrị elu. Onye edemede ahụ na-akpọ maka nyochakwu banyere mmetụta porn nke inwe mmekọahụ. Ejaculation egbu oge B na-egbu oge mgbe 10 na-enweghị porn. Ihe odide:
Ihe ndị a bụ ikpe ndị a na-ewere site n'ọrụ m n'ime Ụlọ Ọrụ Ahụike Mba na Ụlọ Ọgwụ Croydon University, London. Na ikpe ikpeazụ (ndidi B), ọ dị mkpa iburu n'uche na ngosi ahụ gosipụtara ọnụ ọgụgụ ụmụ nwoke na-eto eto bụ ndị GP na-akpọta na ha nwere nchoputa yiri nke ahụ. Onye Ndidi B bụ onye 19 dị afọ na-ebute n'ihi na ọ pụghị ịmịnye ya site na ịbanye. Mgbe ọ bụ 13, ọ na-aga na ebe ọ bụla na-ekiri ihe na-akpali agụụ mmekọahụ ma ọ bụ site na njikọ ndị enyi ya zigara ya. Ọ malitere imetọ onwe ya kwa abalị mgbe ọ na-achọ ekwentị ya maka ihe oyiyi ... Ọ bụrụ na ọ kwụsịtụghị ya, o nweghị ike ihi ụra. Ogba ogba ozo o jiri mee ihe kariri, dika otutu mgbe (lee Hudson-Allez, 2010), na ihe siri ike (ihe obula iwu megidere) ...
Onye ọrịa B gosipụtara ihe osise mmekọahụ site na ihe ndị na-akpali agụụ mmekọahụ site na afọ 12 na ihe ndị na-akpali agụụ mmekọahụ ọ na-eji arịgoro n'ịbụ ohu na ịchịisi site na afọ 15.
Anyị kwetara na ọ gakwaghị eji ihe na-akpali agụụ mmekọahụ egbo onwe ya agụụ mmekọahụ. Nke a pụtara ịhapụ ekwentị ya n'ọnụ ụlọ dị iche n'abalị. Anyị kwetara na ọ ga-eme onwe ya ihe n'ụzọ ọzọ….
Onye Ndidi B nwee ike nweta orgasm site na ịbanye site na nke ise; a na-enye mmemme ahụ kwa izu abụọ na ydlọ Ọgwụ Mahadum nke Croydon, yabụ nnọkọ nke ise dabara na ihe dịka izu 10 site na nyocha. Obi tọgburu ya atọgbu, obi tọkwara ya ezigbo ụtọ. N'ime ọnwa atọ soro Patient B, ihe ka na-aga nke ọma.
Onye Ndidi B abụghị okwu dịpụrụ adịpụ n'ime National Health Service (NHS) na n'eziokwu ụmụ okorobịa n'ozuzu ha na-enweta ọgwụgwọ mmekọrịta nwoke na nwanyị, na-enweghị ndị mmekọ ha, na-ekwu n'onwe ya na mgbanwe nke mgbanwe.
Ya mere, isiokwu a na-akwado nyocha gara aga nke jikọtara ụdị ịkwa iko na agụụ mmekọahụ na ihe ndị na-akpali agụụ mmekọahụ na ụdị masturbation. Isiokwu ahụ mechiri site na-atụ aro na ọganiihu nke ndị na-agwọ ọrịa akparamàgwà mmadụ na-arụ ọrụ na DE anaghị adịkarị edekọ n'akwụkwọ agụmakwụkwọ, nke mere ka echiche nke DE dị ka nsogbu siri ike ịgwọ na-abụkarị nnukwu nsogbu. Isiokwu ahụ na-achọ nyocha n'ime ihe ndị na-akpali agụụ mmekọahụ na mmetụta ya na masturbation na genital desensitisation.
5) Ọnọdụ Ọnọdụ Ahụike Ọrịa Ụmụaka: A Na-amụ Ihe (2014)
Nkọwapụta na-ekpughe ihe gbasara ịmịja na-emetụta ụbụrụ. Nanị di na-enwe mmekọahụ tupu ya alụọ di ma ọ bụ nwunye na-emekarị ihe na-akpali agụụ mmekọahụ - ebe ọ na-enwe ike ịbanye. Ọ na-ekwukwa na ọ bụghị ihe na-akpali agụụ mmekọahụ karịa mmekọahụ. Akụkụ dị mkpa nke ozi bụ na "nyochaghachi" na psychotherapy adaghị agwọ ọrịa ya. Mgbe mmechi ahụ dara, ndị na-agwọ ọrịa na-atụ aro ka a kwụsị mmachibido igbo onwe ha na porn. N'ikpeazụ, mmachibido iwu a mere ka mmekọrịta nwoke na nwaanyị nwee mmekọrịta dị mma na mmekọrịta ya na onye òtù ọlụlụ maka oge mbụ ná ndụ ya. Ihe ole na ole:
A bụ nwoke lụrụ nwanyị dị afọ iri atọ na atọ yana nghazi nwoke na nwanyị, ọkachamara sitere na etiti mmekọrịta obodo na akụ na ụba. Ya na nwoke ọ bụla enwebeghị mmekọahụ. Ọ na-ele ndị gba ọtọ ma na-egbo onwe ya agụụ mmekọahụ ugboro ugboro. Ihe omuma ya banyere mmekorita na inwe mmekorita zuru oke. Mgbe alụmdi na nwunye ya gasịrị, Maazị A kọwara libido ya dị ka nke mbụ, mana emesịrị belata nke abụọ maka nsogbu ya. N'agbanyeghi mmeghari mmeghari anya nke 30-45, o nwebeghi ike iwepu ma obu mezuo orgasm mgbe ya na nwunye ya nwere nmekorita.
Ihe anaghị arụ ọrụ
Ejiri usoro ọgwụgwọ Maazị A bụrụ ezi uche; clomipramine na bupropion kwụsịrị, ma na-echekwa sertraline na ọgwụ nke 150 mg kwa ụbọchị. A na-enwe nnọkọ ọgwụgwọ na di na nwunye ahụ kwa izu maka ọnwa ole na ole mbụ, na-esochi ha kwa izu abụọ ma mesịa kwa ọnwa. Ejiri ụfọdụ ndụmọdụ gụnyere itinye uche na mmetụta mmekọahụ na itinye uche na ahụmịhe metụtara mmekọahụ kama ịmịpụta ọbara iji nyere aka belata nchekasị arụmọrụ na ikiri egwu. Ebe ọ bụ na nsogbu dịgidere n'agbanyeghị mmemme ndị a, a tụlere usoro ọgwụgwọ mmekọahụ siri ike.
N'ikpeazụ, ha malitere iwu mgbochi kpamkpam na masturbation (nke pụtara na ọ nọgidere na-emegharị onwe ya na porn n'oge mmemme ndị a dara ada):
A tụrụ aro ka a machibido ụdị mmekọahụ ọ bụla iwu. A na-amalite usoro mmemme elebara anya (nke izizi na-abụghị nke nwoke na nke nwoke na nke nwoke). Maazị A kọwara na enweghi ike ịnweta mkpali mkpali ahụ n'oge mmekọahụ na-enwe mmekọahụ ma e jiri ya tụnyere nke ọ nwetara n'oge masturbation. Ozugbo amachibidoro igbochi onwe ya, ọ kọọrọ na ọ nwere agụụ ka ya na onye òtù ọlụlụ ya nwee mmekọahụ.
Mgbe oge a na-akọwaghị, mmachibido iwu na masturbation na-eduga na-aga nke ọma:
Ka ọ dị ugbu a, Maazị A na nwunye ya kpebiri ịga n'ihu na Usoro Ntugharị Aka (ART) wee nwee usoro abụọ nke insemination nke intrauterine. N'oge a na-eme ihe omume, Maazị Ejaculated na nke mbụ ya, na-esote nke a nke nwere ike ịmeju afọ ojuju n'oge ọtụtụ n'ime mmekọrịta nwoke na nwanyị.
6) Ihe ndi na-akpali agụụ mmekọahụ na-enweghi mmekorita Erectile n'etiti umuaka (2019)
Abstract: Akwụkwọ a na-enyocha ọdịdị nke foto gba ọtọ na-eme ka a ghara ikpochapụ erectile (PIED), nke pụtara na nsogbu nwoke na nwanyi nwere ike ime ihe na-akpali agụụ mmekọahụ n'Internet. A na-anakọta data gbasara ndị mmadụ na-arịa ọrịa a. Nchikota nke usoro akụkọ ihe mere eme nke mbu (nke nwere onu ogugu nke onyonyo onyonyo nke onyonyo) na ndi mmadu edere ya. A nyochaa data ahụ site na iji nyocha akọwa ihe ọmụma (dịka McLuhan's media theory) si kwuo, dabere na ntinye nyocha. Nnyocha nyocha ahụ na-egosi na enwere mmekọrịta n'etiti ikiri ihe na-akpali agụụ mmekọahụ na nrụrụ erectile nke na-atụ aro causation.
Nchọpụta ahụ dabeere na ajụjụ ọnụ na 11 yana ederede vidio abụọ na ederede ederede atọ. Ndị ikom dị n'etiti afọ 16 na 52; ha na-ekwu na ịmalite ịmalite ikiri ihe na-akpali agụụ mmekọahụ (na-emekarị n'oge uto) na-esochi nri ụbọchị ọ bụla ruo mgbe a ga-eru ebe a na-achọta oke ọdịnaya (gụnyere, dịka ọmụmaatụ, ihe dị iche iche nke ime ihe ike) iji nọgide na-enwe obi ụtọ. A na-eme ihe dị egwu mgbe agụụ mmekọ mmekọahụ na-ejikọta ya na foto ndị gba ọtọ na-agba ọsọ ngwa ngwa, na-eme ka mmekọahụ na-adịghị mma. Nke a na - eme ka enweghi ike ịnọgide na - arụ ụlọ na onye na - ebi ndụ n'ezie, ebe ndị ikom ahụ na - amalite usoro mmegharị ụkwụ, na - ahapụ ihe gba ọtọ. Nke a enyerela ụfọdụ n'ime ndị ikom ahụ aka inweta ikike ha iji nweta ma kwado ụlọ.
Okwu Mmalite nke ngalaba a rụpụtara
Mgbe m debere data ahụ, achọpụtara m ụfọdụ ihe eji eme ihe na isiokwu ndị ọzọ, na-agbaso usoro akụkọ oge niile n'ime ajụjụ ọnụ niile ahụ. Ndị a bụ: Okwu Mmalite. A na-ebute onye mbụ na-ekiri ihe na-akpali agụụ mmekọahụ, mgbe ọ na-etolitebeghị. Ịzụlite àgwà. Onye na-amalite ikiri ihe na-akpali agụụ mmekọahụ mgbe niile. Ịpụpụ. Otu na-eme ka ụdị nke ikiri ihe gbagọrọ agbagwoju anya, nke nwere ọgụgụ isi, iji nweta ụdị mmetụta ndị a mepụtara site na ụdị nke ikiri ihe gba ọtọ. Ịmalite. Onye na-ahụ ihe gbasara nsogbu mmekọahụ na-eche na ihe ndị gba ọtọ na-eji. Usoro nhazi "Re-boot". Onye na-anwa ime ka ikiri foto gba ọtọ ma ọ bụ wepụ ya kpamkpam iji nwetaghachi ike nwoke. A na-ewepụta data site na ajụjụ ọnụ ndị ahụ dabeere na nkọwa ahụ dị n'elu.
Na mgbakwunye na ọmụmụ ihe ndị e depụtara n'elu, nke a nwere isiokwu na vidiyo site na ndị ọkachamara 130 (ọkachamara urology, urologists, psychiatrist, ọkà n'akparamàgwà mmadụ, sexologists, MDs) ndị kwenyere na ha meriri ọgwụ ọjọọ na-emetụta ED na ụbụrụ na-ebute ọnwụ agụụ mmekọahụ.